Midowga Afrika oo Muqdisho soo gaadhsiiyay ku dhawaad 1000 askari ee ciidanka AMISOM. [Akhris …] – Radio Daljir
Midowga Afrika oo Muqdisho soo gaadhsiiyay ku dhawaad 1000 askari ee ciidanka AMISOM. [Akhris …]
Muqdisho, Aug 02 – Burundi oo ciidamo horleh usoo dirtay Somalia sida uu sheegay afhayeen uhadlay ciidamada Burundi dawlada dalkaasi ayaa 850askari usoo dirtay magaalada Muqdisho si loo xoojiyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Africa ee hawlgalka kawada gudaha Somalia.
Marka lagu daro ciidamadii horay usii joogay somali haatan waxaa gudaha Somalia jooga inkabadan 5000 oo askari oo dhamaantood kakala socda dalalka Uganda iyo Burundi.
waxaana hawlgalkan oo biloowday bishii march sanadii 2007 uu sababay dhimashada 17askari oo Burundi udhalatay
?Burundi waxay horay ugu dirtay Somalia labo battalyoon oo gaaraya 1700 oo askari kana waxa uu noqonayaa battolyankii saddexaad? sidaasi waxaa yiri General Lazare Nduwayo oo Burundi udhashay.
Ciidamado gayntan waxay kudhamaatay 4maalmood gudahood iyadoo diyaaraduhu ay ciidmada kaqaadyeen Bujumbura gaynayeyna caasimada Somalia ee Muqdisho xili fiid ah si looga digtoonaado wax weerar ahoo lagu sooqaado sidaasi waxa yiri General Nduwayo
?Waa wax iska caadi ah in aanu shaqaynay iyadoo aanay saxaafadu ogayn waxayna laxiriita amaanka ayuu siiraaciyey Nduwayo
Bishii february ee sanadan 2009 weerar lagu qaaday ciidamada Burundi ayaa sababay dhimashada 11askari iyo dhaawaca 15kale kadib marki qof isa soomiidayey uu isku qarxiyey xerada ay muqdisho kadagan yihiin.
Dalalka Nigeria, Malawi, Sierra Leone,ayaa dhamaantood horay ciidamo ugu deeqay hawlgalka midowga Africa ee Somalia ee AMISOM Haseyeeshee midowga Africa waxay kuguul daraysteen in ay dalalkaasi kadhaadhiciyaan in ay ciidamaasi Somalia usoo diraan.
Axmed Maxamed Jookar